Robot Gacantiisa Ku Ridi Kara Baastooladdaha Iyo Qoryaha Oo Lasoo Saaray
Koox khubaro ah oo u dhalatay wadanka Ruushka ayaa soo saartay Robot cusub oo lagu magcaabo Fedor, waxaanay ugu magac dareen Robot-kaasi isla shirkaddaasi gacanta ku haysay samayntiisa.
Robotkan cusub ayaa awooda inuu gacantiisa ku rido hubka noocyadiisa yar yar , gaar ahaana qoryaha iyo Baastooladaha, sida uu wargeyska Russia Times oo uu warbixintan kazoo xigtay wargeyska Dawan u sheegay Ra’isal wasaare ku xigeenka Ruushka dalkaasi Ruushka.
Khubarada Robot-kan gacanta ku haysa ayaa hore usoo saaray isla robot noocan oo kale ah, kaas oo awood u leh inuu boodo masaafo dheer, waxaana la sheegay in loogu talo galay in loo diro hawada sare sannadka 2021 –ka.
Rogozin oo ka hadlaayey qalabkaasi Robot-ka ee ay soo saareen ayaa sheegay in aanay soo saarin qalab keliyaata ee ay soo saareen Robot awoodi kara inuu ka fikiro waxa uu samaynaayo ka hor inta aanu falka samayn, waxaanu intaasi raaciyey inay bareen habab kala duwan oo uu isticmaali karo.
Waxa kale oo uu sheegay Rogozin in la baraayo Robot-kan sidii loo isticmaali lahaa fureyaasha guryaha, daminta iyo shidista laydhadhka , kaxaynta gawaadhida iyo siyaalo kale oo ah siyaalahay dadku u dhaqmaan .
Khubaradan ayaa rajaynaaya in ay robotkan u diyaarin doonaan inuu ka mid noqdo robots loo qorsheeyey in hawada sare loo diro sannadka 2021 , waxaana robots-kaasi la diyaariyey kharashka ku baxaaya sannadkii 2014 kii.
Robots cusub ayaa la filayaa in dhowan la soo saaro, iyada oo mashruuca lagu samaynaayo hadda tartankiisa la shaaciyey , waxaanu tartankani bilaabmi doonaa 1 bisha May , isaga oo socon doona ilaa bisha February 28 keeda sannadka 2018 .